Banaanbax Ka Dhacay Degmada Jowhar ee Gobolka Shabellaha Dhexe – STAR FM SOMALIA
Banaanbax Ka Dhacay Degmada Jowhar ee Gobolka Shabellaha Dhexe
Wararka ka imaanaya Magaalada Jowhar ee xarunta Gobolka Shabellaha Dhexe, ayaa sheegaya in saaka halkaasi uu ka dhacay banaanbax ay dhigeen dad careysan.
Dadkaan careysan ee Banaanbaxa ku dhigay Degmada Jowhar ayaa ka soo horjeeday iska hor imaad xalay Magaalada ku dhexmaray ciidamo ka tirsan Booliska iyo ciidan horay ugu sugnaa Magaalada oo isla Dowladda ka tirsan.
Dadka Banaanbaxa dhigay ayaa ku dhawaaqaayay erayo ka dhan ah ciidamada Booliska ee Muqdisho laga kaxeeyay, kuwaasi oo Jowhar u jooga suggida ammaanka Shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe.
Labo Askari oo ku sugneyd Xaafada Kulmis ee Magaalada Jowhar ayaa ku dhintay Iska hor imaadkii xalay, labadaasi Askari waxa ay ahaayeen Askar deegaanka ah oo Jowhar laga garanaayay.
Shacabka Banaanbaxa ku dhigay magaalada Jowhar ayaa aad uga xumaaday labada Askari ee ku dhintay dagaalkii xalay ka dhacay Magaaladaasi, waxaana ay ka dalbadeen Maamulka Gobolka in la soo cadeeyo sababta askartaasi loo dilay.
Maamulka Gobolka Shabellaha Dhexe ayaa ku baaqay inay isdajiyaan dadka shacabka ah ee Banaanbaxa ka dhigay Jowhar, si ammaanka Degmada uusan faraha uga bixin.
Magaalada Jowhar ayaa waxaa ka socda Shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe, waxaana Magaalada jooga Ergooyin kala duwan.
Shil gaari oo geystay qasaaro dhimasho iyo mid dhaawac oo ka dhacay duleedka muqdisho
Shirkad ku taal dalka Mareykanka oo gaadiid dagaal ka iibinaysa Somaliya